ခေတ်စားလာတဲ့ လူသား ဟင်းလျာတွေနဲ့ အစားကြူးတဲ့ လူများ – Shwe Thit Sar
01/12/2019 Shwe Thit Sar NEWS 0
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြိုင်အဆိုင်တွေ တွေ့မြင်ရပါတယ် ။ငွေကို အဓိကထားပြီး အမျိုးမျိုးဒုစရိုက်တွေကိုကျူးလွန် လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်နေကြတယ် ။ ၎င်းအဆိုးဆုံး
ဒုစရိုကလူရဲ့အသားရောင်းချခြင်းပါ။ သတ်ဖြတ်တဲ့လူအသက်ရွယ်မှာ (25.)နဲ့ (13)နှစ်အကြားအရွယ်များ ဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုနှစ်ခြိုက်ကြတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
အသက်ပိုရှည်ပြီး ရောဂါလည်း ကင်းရှင်းတယ်လို့ လူသားရောင်းတဲ့ စီးပွားရေးသမားက ကြေညာထားတယ် ။လူသားရောင်းတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှာ အများအား ဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပန်းသေးတရုတ်နဲ့ ဘာသာကိုးကွယ်မှုမရှိတဲ့တရုတ်တွေ အများစု ဖြစ်တယ် လို့သိရသည် ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထိုလူသားအရောင်းဆိုင်မှာ ထိုင်းရဲတွေ လိုက်လံဖမ်းဆီးမှု များတဲ့အတွက် သိပ်မရှိတော့ပါ။ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား မှာတော့ ရှိနေသေး
ဟု သိရတယ် ။ အများကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
တရုတ်မှာလည်း သူလှိုင်းနဲ့သူ သိရှိနားလည် သူတွေသာ ရောင်းချပေးလေ့ ရှိပါတယ် ။ လူသားတစ်ပွဲ (1).
ပန်းကန် ဆိုယွမ်ငွေ (300)ကနေ(1000)အထိ ရှိတယ်လို့သိရသည် ။ဈေးအများဆုံး ပေးရတဲ့ လူအသားက တော့ အမေ့ဝမ်းဗိုက်ထဲ (5)လသားနဲ့ (6)လသား ကလေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။
တချို့ ဆင်းရဲသားအမျိုး သမီးများမှာ မိမိရင်သွေးငယ် လေးများကိုခွဲပြီး ရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ ယွမ်ငွေ (60000)နဲ့(100000)ကြားထဲမှာ ဈေးပေါက်တယ် လို့ဆိုတယ် ။ရင်သွေးငယ်ကလေးပေါက်စလေးအသားတွေ ဝယ်စားနိုင်တဲ့ သူကတော့ တရုတ်သူဌေး(လောပန်း)ကြီးတွေပါပဲ ။
သာမန်လူလတ်တန်းစားတွေ မဝယ်စားနိုင်ပါ ။အရောင်းစားခံရသူ လူတွေထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဆင်းရဲလူတွေအများဆုံးဖြစ်တယ် လို့ တရုတ်ရဲအရာ ရှိတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ ထိုင်းနိုင်ငံ မလေးရှားစသည့် နိုင်ငံတွေ အလုပ်ရှာဖွေလုပ်နေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး သူတပါးပြောတာ အလွယ်လေးနဲ့ မယုံမိသင့်ကြောင်း နိုင်ငံခြားကိုအထင်မကြီးသင့်ကြောင်း အပြောကောင်းသူတွေလည်း မယုံသင့်ကြောင်း အသိရှိရှိနဲ့ သတိထားမိပါစေ ။
” သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်း ချမ်းသာပါစေ ”
#ဖြစ်ရပ်မှန် Page မှကူးယူသည် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်
(Visited 8,359 times,3visits today)